Noho ny halatra finday iray: saika matin’ny fitsaram-bahoaka ilay tovolahy | NewsMada
Par Taratra sur 13/11/2019
Finday iray saika namoizana aina. Izany no nanjo ity tovolahy iray niharan’ny fitsaram-bahoaka noho ny halatra nataony tao Toamasina, omaly. Soa fa nisy nangoraka ka nanatitra azy tany amin’ny mpitandfro filaminana.
Saika notaperin’ny olona ny ain’ity tovolahy tratra nangalatra finday tao amin’ny fokontany Morafeno Toamasina ity, omaly. Miasa amina orinasa lehibe iray aty an-drenivohitra izy io fa nandeha tany Toamasina. Nangalatra finday tao amina trano fanaovam-bolo iray izy, saingy tsikaritry ny tompony izany ka raikitra teo ny fifanenjehana ary niafara tamin’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany. Araka ny fanazavan’ny tompon’ilay finday, nanao volo tao amin’ilay trano fanaovam-bolo izy ka napetrany tsy lavitra ny varavarana mifanila amina trano fivarotana iray ny telefaoniny. Tazan’ity tovolahy ity anefa izany ka mody niditra tao amin’ilay trano fivarotana izy kanjo nangalatra ilay telefaonina finday. Lasa nandositra avy hatrany izy ka raikitra ny fifanenjehana satria tsikaritry ny tompony ny nangalarany izany tao an-trano. Tsy lasa lavitra anefa izy dia tratran’ny fokonolona ka raikitra teo ny daroka. Samy nitsaingoka nanala ny hatezerany tamin’ity tovolahy ity ny olona teny amin’ny manodidina. Nisy kosa anefa ireo nalahelo azy ka niezaka niaro mba tsy hovonoina. Naterin’ny olona teny amin’ny polisy ity mpangalatra ity, taorian’izay.
Lasan’ny jiolahy koa ny 100.000 Ar…
Manao tohivakana koa ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana ao Toamasina, toy ny zava-nitranga tao Ankirihiry Toamasina. Lasan’ny jiolahy nanao fanamiana miaramila sy nitondra basy PA ny vola 1 hetsy Ar tao amina kioska iray. Niezaka nanohitra ireo mpiasa tao amin’ilay kioska, saingy tsy afa-nanoatra manoloana ny basy teny am-pelatanan’ireo jiolahy. Vokany, lasan’ireo mpanafika ny kitapo kely teny amin’ny renim-pianakaviana iray niaraka tamin’ny vola azony tamin’ny fifanakalozana amin’ny tambajotram-pifandraisana. Mafampana indray ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina. Mitondra faisana izay tratran’ny jiolahy, hany ka tsy amelan’ny olona fa iharan’ny fitsaram-bahoaka avy hatrany koa izay tratran’izy ireo.